Muuri News Network » Xasan Shekh oo ku hanjabay in hadii mar kale ay soo laabtaan Dagaal beeleedka Gobolka Sh.hoose ay talaabo ka qaadi doonto dowlada.
Xasan Shekh oo ku hanjabay in hadii mar kale ay soo laabtaan Dagaal beeleedka Gobolka Sh.hoose ay talaabo ka qaadi doonto dowlada.
Sep 11, 2015 - Comments off
Iyadoo in mudo ah Beelaha Habar-Gidir iyo Biyamaal ay ku dagaalamayeen Deegaanada Gobolka Shabeelaha hoose ayaa waxaa arintaasi ka hadlay Madaxweynaha Soomaaliya mar uu shalay booqday Magaalada afgooye.
Madaxweynaha wuxuu ugu baaqay labadaasi beelood inay adkeeyaan heshiis ay dhawaan kala saxiixdeen si aaney u soo laaban dhiig danbe oo daata.
Madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay in hadii ay dhacdo in dagaaladaasi soo laabtaab in Dowladu talaabo qaadi doonto oo aysan sidii hore noqon doonin.
“hadii labadaasi Beelood mar kale dhiig iska daadiyaan hala ogaado odayaal Badan xabsiga ayay Dowladu ku guri doontaa , waxaana xoriyada laga qaadi doonaa mid ana mudneyn iyo mid mudan intaba”ayuu yiri Madaxweyne Xasan.
Waa markii uigu horeysay oo Madaxweynuhu ereyo sidaas u adag adeegsado xili heshiis ay labada beelood dhawaan ku gareen gudaha gobolka ,waxaana ka muuqata ereyada madaxweynaha in dagaalada ay odayaasha wadan . ayuu ugu baqay
Xafiiska wararka muurinews.com